Best ZirconiaSlidePlate, Ring (PM01Quality) Mugadziri uye Fekitori | FunMeet
Iine ruzivo rwetekinoroji inoenderera mberi nekuvandudzwa, ladle slide plate, tundish slide plat converter taphole slag-yekumisa slide ndiro yave ichinyanya kushandiswa mune yazvino yekuyera simbi maitiro. Kuburikidza nehunyanzvi hwehunyanzvi hwekugadzirisa, Fangming Nyowani Zvinyorwa zvakagadzirwa zvichiramba zvichitsvaga uye kuyedza, zvakabudirira kugadzira PMO1 akateedzana epamusoro kuita Zro2 inoumba zvedongo Slide Plate, Mhete, Isa. Vane kupwanya kwakasimba, kukurwa kwevhu uye kupisa kwekushisa, kukwirisa kupfeka kuramba, kwakadzika mumuviri weAl203-c (Corundum castable), serumwe rudzi rwemhando nyowani yemhando yemasiraidhi ndiro inoshandiswa muChina yakakura simbi yezvirimwa, iyo yakawanda nguva yekushandura ondomoka ndiro ka28, ari Max mumwe nendiro nemasiraidhi ndiro ndiro ka8.
PMO1 Series Zro2 Composite Ceramic Slide Plate, Zro2 Mhete, Isa
Zirconia inotsvedza ndiro ine yakanakisa mehendi simba, yakanaka kupfeka kuramba uye kukosora kusagadzikana; Iyo yekugadzira nzira yeakakwira tembiricha inodzivirira zirconia inotsvedza ndiro iri nyore, iyo yekugadzira zirconia inotsvedza ndiro ine yakaderera kusachena zvemukati uye yakakwira chigadzirwa mhando.
Iyo slag yekuchengetedza tekinoroji yekushandura inotsvedza ndiro ndiro tekinoroji nyowani uye maitiro akagadzirwa mumakore apfuura. Tichifunga nezvematambudziko ehurombo hwekupisa hwekupisa senge kupaza uye kupwanya panguva yekushandisa zirconia inotsvedza ndiro, iri basa rinotora matanho ekuvandudza senge optimization scheme yezvinhu zvakaumbwa zirconia inotsvedza ndiro, chikamu chechimiro mutemo we monoclinic / cubic ratio uye iyo optimization ye microstructure, Iyo yekupisa yekuvhundutsa mashandiro eakagadziriswa zirconia inotsvedza ndiro yakagadziriswa zvakanyanya kubva kune yakapfuura katatu nguva kusvika ku6 mumvura inodzima kutsemuka kutsunga nzira nzira bvunzo. Iyo yakagadziriswa zirconia inotsvedza ndiro inoshandiswa mune batch pane iyo simbi inoburitsa ye120t uye 150t inoshandura, hupenyu hwebasa hwakagadzikana padhuze nemavhiri e20, pamusoro peiyo yepasi mutsara ndiro yakatsetseka uye yakatsetseka, uye hapana zvekare zvakapfuura zviitiko zvakadai se kutsemuka uye kubvisa. Mhedzisiro yekushandisa inosimbisa kushanda kweakagadziriswa matanho.
Pashure: ZirconiameteringNozzle (PMDQuality)
Zvadaro: ZirconiaSlidePlate, Mhete (PMDQuality)